Budata Dr. Web Antivirus maka Windows
Budata Dr. Web Antivirus
Free Budata maka Windows (412.82 MB)
Budata Dr. Web Antivirus,
Dr. Web Antivirus bụ mmemme antivirus ị nwere ike họrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ichebe kọmputa gị pụọ na nje na ngwanrọ na -emerụ ahụ.
Mmemme antivirus emebere iji chebe kọmputa gị pụọ na iyi egwu mpaghara na nịntanetị, Dr. Antivirus weebụ abụghị naanị mmemme iwepụ nje nke ị nwere ike iji hichapụ nje ndị batara na kọmputa gị, kamakwa sọftụwia nchekwa nke na-egbochi nje ịbanye na kọmputa gị site na ịnye kọmputa gị ezigbo nchekwa. Dr. Ọta nchekwa nke Weebụ Antivirus nyere nwere ọkwa dị iche iche. Nihi akwa ndị a, a na -echebe kọmputa gị nke ọma pụọ ​​nihe egwu dịka nje, rootkits, trojans, spyware, adware, ngwaọrụ hacking. Dr. Antivirus Weebụ abụghị naanị na -achọpụta nje na diski ike gị, kamakwa ọ na -enye nchebe na mpaghara dịka Ram na nkeji nchekwa mbughari.
Dr. Ọkpụkpụ nke Antivirus Weebụ, Dr.Web Scanner bụ injin nyocha nke na -achọpụta ma na -ewepụ nje. Igwe nyocha a na-enyocha kuki gị, diski USB na RAM yana kuki nje ọhụrụ. Na mgbakwunye, Dr.Web Shield na -enye ngwọta dị mma maka nje ndị na -ezo onwe ha nụzọ dị mgbagwoju anya, dị ka rootkits. Dr. Ebe ọ bụ na Antivirus Weebụ nwere nchekwa data nkọwa nje na -emelite kwa oge, ọ nwere ike meghachi omume na egwu ọhụrụ ozugbo enwere ike.
Dr. Sistemụ nchekwa oge Anti Anti-Web na-arụ ọrụ na sistemụ nlele faịlụ SpIDer [email protected]. Sistemụ nleba anya faịlụ a na -enyocha diski gị mgbe niile, mkpanaka USB na diski mpụga, mgbasa ozi anya dị ka CD/DVD/BluRay, diski floppy na kaadị ebe nchekwa ma na -etinye aka mgbe ihe egwu ọ bụla na -anwa ịbanye nime kọmputa gị na ngwaọrụ ndị a. Usoro a, nke na -enye ọrụ dị mma ọbụlagodi na kọmpụta nwere nnukwu sistemụ sistemụ, nwere usoro nke na -eguzogide deactivation nke ngwanrọ ọjọọ.
Ninwe interface Turkey, Dr. Web Antivirus nwere Dr. Ọ na -echebe gị megide iyi egwu ịntanetị na Firewall Weebụ. Firewall a na -enyocha data na -abata na nke na -apụ apụ na kọmputa gị ma na -egbochi mbọ mbanye. Dr. Antivirus Weebụ nwekwara nchedo email.
Dr. Ọnọdụ egwuregwu nke Antivirus Weebụ na -enye gị ohere ịnweta arụmọrụ kachasị na egwuregwu.
Dr. Web Antivirus Ụdịdị
Nha faịlụ: 412.82 MB